Dare Rinodzora Rinozivisa Kutamiswa Kwemahofisi Makuru Enyika Yose | Bhuku Regore ra2014
Musi weChishanu 5 July 2013, mhuri yeBheteri yekuUnited States yakafara zvikuru kunzwa Anthony Morris weDare Rinodzora achizivisa kuti: “Musi weChina 4 July 2013, chibvumirano chakaitwa chokuti titengese zvivako zvitanhatu zvinosanganisira zviri panhamba 117 Adams Street nepanhamba 90 Sands Street muBrooklyn. Kutengeswa kweZvivako 1 kusvika ku5 kunoreva kuti tinofanira kunge tabvapo patinozosvika pakati paAugust wegore rino.”
Hama Morris vakatsanangura kuti Dhipatimendi Rinowacha Mbatya, riri panhurikidzwa yechitanhatu neyechinomwe muChivako 3, richaramba riri pariri kusvika pakati pa2014. Vakati, “Tingangozobva pachivako chiri panhamba 90 Sands Street mugore ra2017.”
Kutengeswa kwezvivako zvacho zvikuru zvitanhatu kwakaitirwawo kuti mahofisi makuru enyika yose eZvapupu zvaJehovha atamiswe kubva muNew York City kuenda panzvimbo yakakura maeka 253 iri muWarwick, kuNew York. Zvisinei, kugadzirira uye kutanga kuchera nzvimbo yacho zvaisagona kuitwa kutozosvikira magwaro akakodzera avapo.
Nokudaro, mhuri yeBheteri yekuUnited States yakanyatsoteerera chiziviso chakaverengwa naMark Sanderson weDare Rinodzora musi weChina 18 July, chaiti: “Tinofara kuzivisa kuti manheru emusi weChitatu 17 July, Dare Rinoona Nezvemapurani Rekanzuru yeWarwick rakabvumirana nepurani inoratidza pachange pazova nechivako chimwe nechimwe chemahofisi makuru enyika yose eZvapupu zvaJehovha. Iyi ndiyo mvumo yokupedzisira yaidiwa kuti titange kutsvaka magwaro anotibvumira kutanga kuvaka. Onai kuti kubvumirwa kwatakaitwa nezuro kwakauya pashure chaipo pekukwana kwemakore mana kubva zvatakapedza kutenga nzvimbo yatichavakira kuWarwick. Uyezve, zvinhu zvakaitika mazuva mashomanana adarika izvo zvakazoita kuti tipiwe mvumo iyi zvinopa uchapupu hwakakura hwechikomborero chaJehovha.” Hama Sanderson vakaonga munhu wose nebasa guru raakaita uye minyengetero yemwoyo wose yaakapa kuti urongwa uhwu hunokosha hubudirire. Vakati, “Kupfuura zvose, tinorumbidza uye tinoonga Jehovha nemhaka yechiitiko ichi chinokosha pakutamiswa kwemahofisi makuru enyika yose kuenda kuWarwick, muNew York.”
Musi weChishanu 26 July, Hama Morris vakaonana nevazvipiri vepaBheteri uye veDare Rokuvaka Romunharaunda vanosvika 1 000 vainge vakaungana muimba yokudyira itsva muTuxedo, New York, nzvimbo inoshandiswa pakutsigira basa rokuWarwick. Vapedza kukurukura nyaya inokurudzira yaiva nemusoro wemumagwaro, vakazoti vaiva nechiziviso chavaida kupa. Hama Morris vakati, “Muruoko rwangu ndine chimwe chinhu chandichangobva kugamuchira chandinoda kuti muzivewo nezvacho. Nechepamusoro pefomu iri pakanyorwa kuti: ‘Mvumo Yokuvaka.’” Vasati vatomboenderera mberi nokuverenga, vazvipiri vacho vakaombera zvakasimba vachifara. Vaivapo vakafara, Hama Morris pavakaenderera mberi nokuverenga zvikamu zvegwaro rainyanya kukosha raivapa mvumo yokuvaka, ravainge vapiwa nekanzuru yeWarwick maawa matatu chete ainge apfuura.
Chii Chiri Kuitwa kuWallkill, kuWarwick, Uye kuTuxedo?
Kubva pakatanga kuitwa basa rokuwedzera zvivako zvekuWallkill muna August 2009, hama nehanzvadzi dzinenge 2 800 dzave dzichishanda ikoko sevazvipiri venguva pfupi. Basa racho rinosanganisira kuwedzera nzvimbo dzokugara, nzvimbo yokupakira motokari, nechivako chine mahofisi. Chimwe chezvivako zvine dzimba dzokugara chiri kugadziridzwa, uye zvimwe zvinhu zviri kuchinjwa kuimba yokudhindira, imba inowachirwa, auditorium, services building, uye nzvimbo inosvikira vaeni. Basa rokuwedzera zvivako zveWallkill rinotarisirwa kuti richapfuurira kusvika pakupera kwa2015.
Pari zvino, basa rokuvaka rakatotangwa panzvimbo ichange yava nemahofisi makuru enyika yose kuWarwick. Mumwedzi mishomanana kubva zvakatangwa basa racho, kugiredha nekuchera, uyewo kuisa zvinhu zvinoshanda zviri muvhu kwave kuchiitwa. Basa rokuvaka zvivako zvitatu zvokutanga—Garaji Rekugadzirira Motokari, Nzvimbo Yokupakira Motokari Dzevaeni, uye Maintenance Building—rakatangwa gore ra2013 rava kunopera. Zvivako izvi zvinokosha pakuti zvinoshandiswa nevashandi uye pakugadzirisira midziyo panguva yokuvaka uye kana kwazopera. Kana zvapera pachazovakwa zvivako zvine dzimba dzokugara uye chivako chine mahofisi, izvo zvakarongwa kuti zvitange muna 2014.
Zvivako zveTuxedo, zviri makiromita 10 kuchamhembe kweWarwick, “zvichashandiswa pakutsigira basa rekuvaka panzvimbo ichange yava nemahofisi makuru enyika yose kuWarwick,” anotsanangura kudaro Kenneth Chernish ari nhengo yeDare Rokuvaka. “Pachange pachizogara vamwe vashandi vanozvipira uyewo ndipo pavanenge vachigadzirirwa zvokudya uye vachitora zvokushandisa pakuita basa.” Kuti basa rokuvaka rikurumidze kuitwa pazvivako zvekuTuxedo, pane Matare Okuvaka Omunharaunda dzokumabvazuva kweUnited States akasarudzwa ave achibatsira nemamwe mabasa.
Vazvipiri vakawanda avo vanoshanda neMatare Okuvaka Omunharaunda munyika yacho yose vanotarisira kuitawo basa rokuvaka mahofisi makuru enyika yose. Hama nehanzvadzi dzine unyanzvi dziri kutozvipira kuita mabasa kwenguva pfupi panzvimbo idzi dziri kuvakwa. Leslie Blondeau, uyo anoshanda muDhipatimendi rePlumbing nemurume wake, Peter, anoti, “Kushanda pamwe chete kunoita kuti tive pedyo nepedyo uye tive nezvinhu zvinofadza zvatinozofunga nezvazvo kwenguva refu.”
“Iye zvino ndiri kushanda neboka rinoita zvemagetsi kuno kuTuxedo,” anodaro Mallory Rushmore. “Zuva rimwe nerimwe zvinonakidza kuona vanhu vose vari pano—vazvipiri vose—tese tichishanda pamwe chete.”
“Iyi iropafadzo yakakura zvikuru,” anodaro Quincy Dotson. “Ndaifunga kuti ndaizenge ndichipa zvakawanda zvikuru, asi kutaura chokwadi, ndave ndichiwana zvakatowanda.”
“Zvinofadza zvikuru kuitawo basa iri,” vanodaro Hama Chernish. “Hama nehanzvadzi dziri kuita basa racho nokukurumidza uye nomazvo, panguva imwe chete dzichinakidzwa zvikuru nokuriita.”